Sergino Dest oo ka hadlay goolkiisii ugu horreeyey ee uu xalay u dhaliyey Kooxdiisa Barcelona – Gool FM
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane guuldarradii ay kala kulmeen kooxda Athletic Bilbao??
Athletic Bilbao oo jaratay tikitka finalka Spanish Super Cup kaddib markii ay ka adkaatay Real Madrid… +SAWIRRO
Arsenal oo garoonkeeda Emirates barbardhac kula dhaafi weysay kooxda Crystal Palace…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Athletic Bilbao ee tartanka Spanish Super Cup-ka oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Sergino Dest oo ka hadlay goolkiisii ugu horreeyey ee uu xalay u dhaliyey Kooxdiisa Barcelona
Haaruun November 25, 2020
(Barcelona) 25 Nof 2020. Sergino Dest ayaa ka hadlay goolkiisii ugu horreeyey ee uu u dhaliyey kooxda Barcelona, waxaana uu xusay inuu aad ugu farraxsan yahay, isla markaana uu u baahnaa inuu dhaliyo goolkaan.
Sergino Dest ayaa shabaqa soo taabtay oo dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee Barcelona, xilli xalay Kooxdiisa ay iska xaadirisay wareegga 16-ka Champions League.
Daafaca garabka midig ee reer Mareykan ayaa qeyb ka ahaa bandhiggii goolasha Barcelona ay xalay kaga adkaatay Kooxda Dynamo Kyiv , iyadoo kooxda Tababare Ronald Koeman oo aan wadan Lionel Messi ay marti ahaayeen, isla markaana ay saddexda dhibcood oo muhiim u ahaa soo qaateen.
“Dhab ahaantii anigu aad baan ugu farraxsanahay inaan dhaliyo goolkeygii ugu horreeyey” ayuu yiri Dest kulanka kaddib.
“Waxaan u malaynaa inaan u baahnayn gool, waxay ahayd mid muhiim ah in la dhaliyo gool oo ciyaarta laga dhigo 1-0, waxaana rajeyneynaa inay imaan doonaan kuwa badan.
“Waxaa noo harsan labo kulan oo dheeri ah, laakiin waxaan hadda ku jirnaa boos fiican, sidaas darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan guuleysannay, mana sugi karo ilaa aan ka ciyaarno kulanka xiga.
Ole Gunnar Solskjær oo si cad u sharaxay fikirkiisa ku aaddan qaab ciyaareedka xiddigaha Van de Beek iyo Edinson Cavani
Luka Modric oo xaqiijiyey Kooxda uu ciyaarihiisa ku soo gabagabeynayo, xilli heshiiskiisa Real Madrid uu ku eg yahay 2021